Dhibaatooyinka la leh liisanka ArcGIS - Gofumed
Dhibaatooyinka la leh liisanka ArcGIS
Disember, 2007 ArcGIS-ESRI
Badanaa firfircoonida liisanka darajada ArcGIS waa madax xanuun, ama ka dib marka la isticmaalo waa la tirtiray oo waxay u muuqataa in ay u baahan tahay dib u samaynta sababta oo ah ma akhrin karo. Tani waa qaabka caadiga ah ee lagu dhaqaajiyo:
Ruqsadda waxaa lagu furfuri karaa iyadoo loo marayo fayl gareysan ama adeeg, adeegga ugu fudud ee waxtarka adeega waa:
1. Hayso qalabka ruqsadaha
Sidaa darted waxaad bilowdaa / barnaamijyada / qalabka maamulaha / maamulaha liistada arcGIS / liisanka
2. Guddiga faylka / liisanka waxaad dooran kartaa ikhtiyaarka "isticmaalka adeegyada"
3. Markaad adeegsanaysid habka adeegsiga, waxaad ka heleysaa faylka lmgrd.exe, liisanka license.dat, ka dibna keydee ikhtiyaarka leh "keydinta adeegga" (Faylka .dat waa midka lagu qeexay magaca qalabka shatiga leh)
4. Adeegso adeega, waayo waxaad tegi kartaa "bilaabida / joojinta / reread" ee calaamadda, guji "Maamulaha liisanka" Arcgis, ka dibna "bilaabida server". Ka dib dhowr ilbidhiqsi waa inay u muuqataa sida firfircoon.
Dhibaatooyinka joogtada ah
Marar badan oo ku jira doorashadan ma dhaqaajin karo liisanka, farriinta "bilawga bilawga" ayaa soo muuqda ama dhowr bilood ka dib markaad isticmaasho waxaad fariin ka heli kartaa diiddan:
«Bixi maamulahaaga liisanka liisan ee macluumaadka soo socda:
Ma isku xiriiri karaan server liisan, server (lmgrd) weli ma bilaabin, ama khaldan dekada @ martida ama feylka la isticmaalayo, ama dekadda ama magaca martida ee faylka liisanka ayaa la beddelay. Feature: ARC / INFO, magaca server, wadada liisanka, qalad casri ah: -15,10. Qalad qaldan: 10061 guuldareysatay: isku-xirid la'aan »
Habka ugu fudud ee waxtarkiisu yahay:
guriga / kontoroolka gacanta / qalab maamul / adeegyo
markaa waxaad raadineysaa adeeg la yiraahdo «Maamulaha liisanka liisanka ee ArcGIS», dooro oo ku darso "adeegga firfircoon" icon, haddii ay u muuqato in la furfuro waxaad ku samaysaa "adeegga dib u bilawga" icon
Post Previous«Previous Sida loo barto Microstation (iyo wax baro) si fudud
Post Next Geofumadas duulimaadkii December 2007Next »
75 Jawaab "Dhibaatooyin la leh liisanka ArcGIS"
qaladka soo socda ee ArcMap 10.7.1 markii aan bilaabay, waxaan mar hore isku dayay wax walba laakiin wali waxay u muuqataa waqtiga la joogo 'dokumentiga rarka' ...
Dante isagu wuxuu leeyahay:
Waxaan haystaa dhibaatada ArcMap 10.3, waxaan u maleynayaa in aqlabiyadda ay leedahay lahjaddaan, xalka ay ku jiri karto dhibaatada aan soo bandhigin GO TO XY option,
Ciise Ramirez isagu wuxuu leeyahay:
Waxaan dhibaato ku qabaa rakibida arcgis 9.3 waxay ii calaamadeeysaa khalad ku jira qaladka martigeliyaha 11001. qof ayaa i siin kara xalka fadlan
Cadi isagu wuxuu leeyahay:
Waxaan haystaa dhibaatooyin aan ka tirtirin Maamulaha Liisanka ee Arcgis 10, laakiin ma ogolaaneyso. Waxaan isku dayay inaan ka sameeyo guddiga kantaroolka laakiin waxay ii sheegeysaa inaanan haysan oggolaansho, waxaan sidoo kale isku dayey Revo Unistaller iyo Maareeyaha Shatiga ee barnaamijkiisa si aan u tirtiro. Qofna miyuu leeyahay fikrado?
hello dhamaan wixii aan haysto dhibaatada leh fariin 10 Waxaan rabaa in aan sameeyo khariidad roobeed ka dib marka la sameeyo habka isudhigidda IDM markasta waxaan helayaa qalad isku mid ah hababka kale. sida haddii aan isticmaalo juquraafiicda aan helayo qaabka laakiin ma dhigi karo raajo si ay u awoodaan inay sameeyaan map algebra
Daa'uud isagu wuxuu leeyahay:
Waayahay Waa salaaman tihiin Saaxiibbada dhib ayaan qabaa laakiin marka hore in la yiraahdo nooca Arcgis ee aan adeegsanayo waa 9.3. Dhibaatadu waxay tahay markii aan adeegsaday aalad buugga qalabka oo aan ka helo calaamad aad u foolxun oo dhahaysa haddii laysankaygii aan la shaqeysiin, laakiin kaliya loogu talagalay aaladda 'falanqaynta lafdhabarta' 3d iyo kuwa kale ee aan gadaal ku rakibay ...
mahadsanid waxaan rajeynayaa jawaab
Waxay noqon laheyd mid aad u fiican haddii qof uu jawaabo tan, sababtoo ah aniga ayaa igu dhacaya. Dareemku wuxuu la yimid ruqsad rasmi ah ... oo aanan haysan wax faahfaahin ah oo shati leh !! Qof kastaaba wuu ogyahay sida loo saxayo?
Shagui isagu wuxuu leeyahay:
Waxaan isku dayaa in la sameeyo tan iyo waxba oo dhan shaqeeyay oo aniga iyo imtixaanka oo imtixaanka waxaan bartey shaqeeyay markii goynta wireless, ie markii in ka jari internet sida haddii by sixir waan u xaliyo dhibka iyo furi karaa barnaamijka oo aan dhibaato lahayn, aan su'aal haatan tahay in haddii uu jiro wax plugg-in ama file qalaad this my computer invandiendo ???? Waan u mahadcelinayaa
Taasi waa inay soo saartaa nidaamka markii aad ku rakibtay barnaamijka. Haddii aad dhib ku qabtid tan, waa inaad wacdaa takhtarkaaga, maxaa yeelay waxaan fahamsanahay inaad haysato shati sharciyeed.
Haddii aad raadineyso liisanka la jebiyey, ma nagu caawin karno si aad u xun.
Tabaruc aad u wanaagsan. Markii aan raadsado halka loo doonayo "file.dat" faylka, kama muuqdo mana garan karo halka aan ka helo. Tani waxay kaa horjoogsaneysaa inaad mar labaad dhaqdhaqaaq kaarto arcgis.
Narcissus isagu wuxuu leeyahay:
Dhibaato ayaa i haysata, undo arcgis 9.3 maxaa yeelay, markii la isticmaalayo arctoolbox, ma helin aalad loogu badalo raster ga polygon, kaas oo aan ku hubiyay aaladda / kordhinta liiska, waana ka maqnaa, waxaan doonayay inaan rakibo kordhinta, laakiin waxay u dhaqmeysay si la mid ah , ka dib waxaan go aansaday inaan ka furo arcgis, iyo sidoo kale laysanka aanan awoodin inaan ku kala furo dadka wax xiraya, haddii qof iga dhaafo isla kan fadlan ii sheeg sida aan u sameyn karo, waxaan rabay inaan tirtiro faylka "ESRI", halkaas oo ah shatiga kiraysiga oo leh magaca 9.xlic laakiin ma tirtiri karo, markii aan ka rogo ka koontaroolka koontaroolka wuxuu i siinayaa farriin deg deg ah oo oraneysa daaqadda 'Uncleall Unistall window'; aan waxtar lahayn, waxaan rajeynayaa in asxaabta la shaqeysa arcgis ay i caawin doonaan. Mahad iyo salaan dhamaantiin.
Rolando Obregon isagu wuxuu leeyahay:
Waxaan leeyahay 10 arcgis ah, wax kasta oo si fiican u shaqeeya marka laga reebo marka aan dhoofin ama geodatabases importo, waxa abuuraa qalad iyo in ii muujinayaan, in aan liisan ma aha asalka ah, sidii aan xal u heli karo dhibaatadan, ma haddii qof tube dhibaatadan iyo Waan xallinayaa.
Diego Quispe isagu wuxuu leeyahay:
Wax dhibaato ah marka isagoo in Manager Tababaraha License ah si aad u bilowdo my server baan ka heli fariin qalad ah: kombiyuutarka aad u dooratay ma aha server a liisan ansax ah ama waxaa la socda version weyn ee tababare liisanka, waxaan i hanuunin lahaa saaraysa
Waad ku mahadsantihiin deeqdan weyn. Waxaan rabaa inaad ogaato in kuwan xarriiqyada fudud ay xalliyaan madax xanuun
Dhib ayaan qabaa
Anigu waxaan haystaa ruqsadda saxda ah ee kicinta iyo kordhinteeda iyo mabda'a waxaan sameeyay wax kasta oo loo baahan yahay in la sameeyo si loo rakibo laakiin marka la furo arcmap oo aan ku siinno qalabka iyo farsamooyinka waxna ma arko. qof ayaa iga caawin kara fadlan xallinta dhibaatada
shucaacu waxay shaqeysaa1
Qalad noocee ah ayaa adiga kugu riixaya? Maxaad sameyneysaa si aad u xalliso?
María isagu wuxuu leeyahay:
Hello, habeenkii wacan, waxaan u mahadcelinayaa shaqadaada boggan sababtoo ah aad bay u wanaagsan tahay.
Waxaan dhib ku qabaa Arcgis 10. Aniguna waan khaldanahay qalabka 'TO TO XY'. Waxaan ku rakibay xirmada servi sidaa darteed waa la hagaajin karaa qaar ka mid ah qalabka sanduuqa Arctool, sida isbaarada, si dhakhso leh u jooji shaqada. Haddii aan hagaajiyo khaladaadka "dhaadheer", GO TO XY wuxuu joojiyaa shaqadiisa.
Haddii qof i caawimi karo, fadlan, waa inaan shaqooyin badan u qabtaa jaamacada mana shaqeyn karo.
Hagaag, wax fikir ah kama haysto waxa dhici kara. Haddii rakibaaddaadu ay tahay mid sharci ah, la xiriir kaalmada ESRI ee dalkaaga.
yar isagu wuxuu leeyahay:
Waxba, weli ma bilaabin. Waxaan laba jeer dib u soo celiyay, waxayna i siisaa dhibaato isku mid ah ...
Waxaan isku dayi doonaa oo ka faalloon doonaa waxa socda.
Waa wax cajiib ah, sidoo kale, maxaa yeelay ArcGis faylasha kombiyuutarka ayaa u aqoonsan inay la furto ArcMap, laakiin laba jeer gujisid barnaamijku ma furna.
Waa qalad la mid ah kan ku xusan qof ka tirsan golaha kartuuniga: http://www.cartesia.org/foro/viewtopic.php?t=12778
Laakiin, kiiskan, ma isticmaali karo mashiinka kombuyuutarka, haddii aan ahayn mid sahlan PC.
Markaa xaqiiqdii rakibaadda way dhaawacantay. Waa inaad dib u soo celisaa
Waxaan loola jeedaa daaqada bilawga ah ee aad leedahay barnaamijyo badan markaad u furaneyso adigoo xiraya interface.
Maamulaha liisanka wuxuu i siiyaa dhammaan ruqsadaha oo dhan, waxayna u muuqataa in wax walba ay sax yihiin.
Waa uun sida haddii barnaamijku uunan furmin.
Buugani wuxuu ku jiraa sanduuqa wax soo saarka.
Anigu ma fahmi karo markaad tiraahdo daaqada caadiga ah ee la furo.
Waa inaad aragto balanta dheeraadka ah ee aad u leedahay firfircoonidaada.
Dhibaato ayaan haystaa ArcGis 9.2. Anigu si sax ah ayaan u rakibay, maamulaha liisanka ayaa sheegay in wax walba wax walba la qabsado, laakiin waxaan bilaabay inaan furo mid ka mid ah barnaamijyadeeda, sida ArcMap, oo kaliya waxaan furaa daaqada caadiga ah marka barnaamijku furmo: naqshadda, version, iwm. . Oo wax kale laguma arko. Ma i siineyso nooc kasta oo qalad ah. Maxay noqon kartaa? Isticmaal Windows XP, macluumaad dheeraad ah.
Si aad u aragto haddii qof uu i siin karo xalka, mahadsanidii hore ..
billy isagu wuxuu leeyahay:
fadlan waxaan rabaa in aan rakibo fidinta aan ubaahanahay kaalmo fadlan iigu soo dir mahad iwm.
Jane isagu wuxuu leeyahay:
Anigu waxaan ku rakibayaa ArcGis waxaanan ahay wax aan caadi aheyn tan ... Waxaa jira qalad ah oo soo kordha mar walba, waxaan u maleynayaa inay tahay wax la yaqaan laakiin ma dhaafi karo.
Ma aqaan sida loo dhigo ama meesha aan wax ka beddelo "pan-reload" magaca kombuyutarkayga ... Ma garanaysaa sida loo sameeyo? WAAD KU MAHADSAN TAHAY
Fursad: ARC / INFO
Magaca loo yaqaan 'host-reload'
Jidka liisanka: C: \_ faylasha Barnaamijka \_ ESRI \_ Liisanka \_ arcgis9x \_ ArcGIS9.lic;
Khaladaadka shati siinta FLEXnet: -96,7. Khaladaadka Nidaamka: 11004 «WinSock: Magaca qumman, laakiin wax duubitaan ah (NO_ADDRESS)»
Waxaan u maleynayaa inay ugu habboon tahay inay la xiriirto bixiyahaaga ESRI-gaaga, sababtoo ah haddii aad iibsatay liisan sharci ah waa inaadan haysan dhibaato.
bisad isagu wuxuu leeyahay:
fadlan waxaan ubaahanahay caawimaad aragnimo 9.2 ayaa iigu shaqeyn jirey horaantii hadda in aan furo markale ayaa i siinaya qalad ijaarka ah, waxaan raacay talaabooyinka oo dhan laakiin ma shaqeynayo, fadlan iga caawi fadlan
galvan isagu wuxuu leeyahay:
Tan waxaan u helay sababta oo ah waxaan rabaa inaan ogaado Siinta maamulaha shatigaaga liisanka macluumaadka soo socda:
Mashiinka mashiinka ruqsadda ayaa hoos u dhacaya ama aan ka jawaabin.
Eeg nidaamka nidaamka ku saabsan bilawga nidaamka adeegsiga liisanka, ama
hubi inaad u gudbinayso aqalka saxda ah (eeg LM_LICENSE_FILE).
Magaca martida: Not_Set
Wadada laysanka: © Not_Set;
FLEXnet Ruqsad u siinta erron-96,7. Khaladaadka Nidaamka: 11004 «WinSock: Iibixi aniga, laakiin maya
rikoor (NO.ADDRESS) »
Taasi waa sax, waxaad keliya ku sameeyn kartaa adiga oo isticmaalaayo user admin.
Jessica isagu wuxuu leeyahay:
Hello, waxaan haystaa dhibaatada ah in aanan dib u cusbooneysiinin liisanka horey u ahaa mid la maareynayay, waxaan ku dhejiyey faylasha balse waxaan u sheegayaa inaan u baahan yahay fasax maamulaha. mahadsanid
Hagaag, sida muuqata xiriirka liisanka ayaa lumay. Waxaa suurtogal ah inaad ku rakibtay barnaamij nadiifinaya diiwaanka, oo haddii ay sharci darro ahayd, halkaas ayey ku soo baxday.
Waxyaabahaas, ujeedooyin xirfad leh, way ka fiican yihiin iibsashada sharciga ama isticmaalaan barnaamijyada kale ee qaaliga ah.
Sida ugu fiican, waa inaad la xiriirtaa shirkadda iibisay liisanka.
Cris isagu wuxuu leeyahay:
resuilta si loo soo dajiyo 9.3 arcgis iyo wax kasta oo ka tagaan, laakiin markii aan si Inio / barnaamijyada / arcgis / desktoplicence tagaan si .. saaray tababaraha liisanka, dakhliga magaca computer ah, oo aan heli qalad ah oo ku saabsan shatiga hore waa wax u eg . Waxaan u tagaa liisanka ruqsadaha ah iyo magaca ayaa sax ah. Waxaan u baahanahay gargaar degdeg ah sababtoo ah waxaan ahay mas'uul ka ah mashruuca iyo Waxaan ku ordi wiilasha 2 kii arrinta taagan ... by faaaaaaaaaaa
Benyaamiin isagu wuxuu leeyahay:
hello saaxiibo horay u mahadcelisey taageerada.
Mashiinkaygu wuxuu leeyahay 7 daaqad, waxaan haystay 9.3 arcgis illaa inta aanan awoodin in aan galo fariin been ah.
Waan raacay talaabooyinkaaga laakiin waxaan dhibaato ku qabaa markaan keydinayo ikhtiyaarka badhanka “keydinta adeegga.” Waxay muujineysaa in FLEXIm licens serviceice isbedelkiisii ​​la waayey, maxaa yeelay waxaan u baahanahay inaan noqdo maamulaha howshan qabta, sida aan anigu u fulinayo tillaabadan, maadaama Wali waxaan hayaa farriintaan caytanka ah.
Waxa dhaca waa inaad suurtagal tahay inaad gashato laysan sharci darro ah. Markii la rakibayo xirmada Adeegga 1, diiwaangelinta ayaa la nadiifiyay, waana sababtaas awgeed waxay ku weydiineysaa inaad iibsato shatiga.
Kama caawin kari weydo arrintan, sababtoo ah siyaasadeenu waxay naga horjoogsataa inaan dhiirrigelinno dhaqamada ku xad gudbaya xuquuqda macaamiisha fikrada.
Jorgen isagu wuxuu leeyahay:
hello haddii aad iga caawin karto aniga oo rakibaya arcgis 10 rakibida wax kasta oo saxda ah laakiin shaqada ar Boxlol sanduuqa / maareynta xogta iyo aaladda falanqeeyaha xajmiga ma xusin khalad sheegaya in qalabkani uusan lahayn liisan; Markaad ku xirxirayso xirmada adeegga 1, barnaamijka wuxuu joojiyay inuu shaqeeyo, fadlan iga caawi inaan haysto dhibaatadan muddo dheer
hello haddii aad iga caawin karto inaan ku rakibno xayiraad 10 wax kasta oo si sax ah u rakibo, laakiin shaqada arctolol / maareynta xogta iyo qalabka falanqaynta falanqayntu ma sheegin qalad sheegaysa in qalabkan uusan lahayn liisan; markii lagu rakibay xirmadda adeegga 1, barnaamijku wuxuu joojiyay shaqada
Xaalado badan, marka rakibida shatiga ruqsadu waxay joogtaa 88%, mana dhaafayso.
Waa inaad hubisaa haddii ay la socoto ogolaansho maamul.
Taas oo aan la socon ruqsada keli ah, waxaad ku jirtaa inaad iibsato wakhti dheeraad ah.
Paul isagu wuxuu leeyahay:
Salaan, farxad wacan, waad ogtahay, ArcGis 9.3 ma aanan arkin dhowr arctools ah, oo ka mid ah, qalabka beddelashada ... oo aan runtii u baahanahay hadda ... si fiican haddii aad i caawin kartaan, weligay mahadsan tahay. Aad baad u mahadsantahay isku mid.
Hagaag, soo iibso. Taas ayaa si gooni ah loo bixiyaa.
Jairo B isagu wuxuu leeyahay:
Haa, waxaan haystaa dhibaato ah in liisanka latahay inaanan haysan ruqsada isticmaalka qalabka falanqaynta geoestatistx ee samayn kara?
Ramoncho1 isagu wuxuu leeyahay:
Gacaliye Qaali ah:
Dhibaatadu waxay tahay in la arko macluumaadka mashaariicdu ay sii socdaan, caddeeyaha muuqaalada ku jira aragtida, waa inay ku jiraan faylka ay mashruucani ku xiran yihiin. Taas macnaheedu waa haddii qaababkaadu ay ku jiraan C: \_ Practice, galkaas waa inuu jiraa. Hadday sidaas tahay, waxay u badan tahay in faylasha qaabdhismeedka la jabsaday waqtiga rayshada.
Fursad kale waa in ay ku habboonaato mid kasta oo mawduuca ku qoran miiska miiska oo aad tagto Xogta Xogta / Dayactirka Xogta ... Doorashada si aad u hesho qaabka ku jira faylka halkaasoo hadda la joogo.
Sidoo kale, mashaariicda (* .mxd) ayaa lagu qiyaasi karaa xilliga ay badbaadinayaan, si barnaamijku u eego qaababka iyadoon loo eegin diskka meesha ay joogaan, illaa inta waddadu isku mid tahay.
boqorada saman isagu wuxuu leeyahay:
hello waxaan rabaa inaan su’aal sameeyo Waxaan sameeyay khariidado qaarkood oo leh xNUMX arcgis laakiin nasiib darro mashiinka wuu dhaawacmay waxaan soo kabsaday feylasha waxaan ku rakibay arcgis mashiin kale laakiin waqtigaan furitaanka feylasha mashiinka kale waan ku xirey feylka laakiin ma sameyn karo wax ka badalid maxaa yeelay waxaan helaa calaamado ixtiraam leh oo ka dhigaya calaamadaha inay u muuqdaan kuwo aan shaqeyneyn sida aan sameyn karo si aan u furo.
si taxadar leh
Joororod isagu wuxuu leeyahay:
Waad ku mahadsantahay aad u badan, haddii ay shaqeyso oo aanan dib u eegin daaqada dhibaatooyinka leh shatiga marka la bilaabayo arcgis 😉
Hambalyo ku saabsan boggaaga waa mid aad u fiican.
Waxaan leeyahay 8.0 Arcgis aan lagu rakibay on PC la Windows 7 ka yara 32, waxaan isku dayayaa inaan ku shuban qalabka, laakiin mid kastaa wuxuu I dooro ahaanee waxaan qiimeyn progam ah oo fariin leh in ArcMap ayaa joojiyay shaqeeyaan, waxaan hore u soo rakibay on Windows XP waxayna shaqaysay dhibaato la'aan
Waxaan la kulmay dhibaatooyin la mid ah dad badan oo qalad ah 15,570, oo sheegaya in maamulaha liisanka uusan ku xirneyn.
Waa hagaag, dhibaatadu waxay ka timaaddaa daaqad-daaqadaha daaqadaha, waxay u diidi kartaa barnaamijkaas, dib-u-dhiska oo wuxuu bilaabaa inuu shaqeeyo. Waxaan ku rakibay Windows 7 waxayna u socotaa dhamaystirka.
Teresa isagu wuxuu leeyahay:
hello g ayaa sheegay, in aad u mahadcelisid caawimadaada, dabcan waxaan isticmaalay dhammaan noocyada kala duwan ee qaababka, iyo kuwa kale ee aad noo soo jeedisay, iyadoon natiijooyinka, waxaan qabaa waxa ugu fiicani waa in la bilaabo la shaqaynta calaamado kale.
Waad ku mahadsantahay oo aad u mahadsantihiin
Waxaan qiyaasayaa in Jhunior iyo Teresa ay ka hadlayaan nooca aan ruqsad laheyn ee ArcGIS 9. Hadday sidaas tahay, markaa waxa ugu waxqabadka badan waa inaad u wacdid wakiilkaaga kaas oo iyaga ka iibiyey barnaamijkaas, sababtoo ah wixii ay bixiyeen waa inaad ku taageertaa.
Haddii ay ka hadlaan daroogada sharci darada ah ... mmm adag, shuruucda blogkani ma ogola inay taageeraan dhaqamadaas.
Amarka macquulka ah ee tani waa:
-Ku rakib maamulaha liisanka
- Isticmaal shaxda liisanka.
Tallaabada labaad ayaa ah inaanan ku taageeri karin, sababtoo ah waa inaad haysataa .dat ama faylka fidinta halka ay ka diiwaan gashan yihiin rukhsadaha aad soo iibsatay (ama aad ka soo heshay halkaas). Meesha aad ka soo degsatay khiyaamada, waa inaad soo degsatay tilmaamo kuu sheegaya talaabo talaabo sida loo sameeyo, labada xp iyo Vista, way ka duwan tahay.
Hi, waa wax weyn in la akhriyo boggan oo la helo rajo. Ka dib muddo dheer oo aan la shaqeynayay arcGIS waxaan go aansaday inaan rakibo waxoogaa cusboonaysiin ah waxaan ula jeedaa 9.2 ama 9.3 laakiin ma jiro wado, Waxaan xitaa isku dayay inaan rakibo kii hore mar kale laakiin natiijooyin la'aan, waxaan isku dayay inbadan oo aan haysto aruurinta khaladaadka ka baqaya. Khaladkii ugu horreeyay ee aan helay kadib markii aan isku dayay inaan rakibo 9.2 wuxuu ahaa in "LMGRD ay ogaatay dhibaato ayna qasab ahayd in la xiro", qaladaad kale oo caadi ah waa midka u muuqda "server diags" oo sheegaya in faylka liisanka uu ka yimid Autodesk Map 2004 iyo sidoo kale sidaad u aragto dhibaatooyinka oo dhan; Waxaan fahansanahay in dhacdada ay ku taal laysanka, ma i siin kartaa xadhig?, Xoogaa waan ubaahanahay.
Salaan nabad ah
jhunior isagu wuxuu leeyahay:
Haa, sideed tahay
Qof ayaa ii sheegay in sabab kale oo ah sababta dhibaatadu u dhici karto, in adeeggu u muuqdo inuu lumo waa inuu beddelo lambarka IP-ga mashiinka.
Taas waxaad u eegi kartaa lmtools, tabaha nidaamka nidaamka, haddii cinwaanka IP la mid yahay midka loo xilsaaray mashiinka.
Anigu ma aan awoodin inaan xaqiijiyo, laakiin waan u dhaafaa si aan u xaqiijiyo.
Maya maahan run
lgar1401 isagu wuxuu leeyahay:
Hello, waxaan heystaa 9.3 socodka, waxaa la ii sheegay in haddii aan barnaamijka furo internetka furan, waxaan joojin doonaa argis. Ma run baa?
Kani waa fayl ay ku jiraan macluumaadka laysanka aad soo iibsatay iyo kumbuyuutarkaaga, inta badan waa la shaqeynayaa marka ugu horeysa ee barnaamijka la rakibo oo aad iska diiwaangeliso. Haddii aadan ka heli karin, meel ku hel wakiilka ESRI ee kaa iibiyay barnaamijka.
favial86 isagu wuxuu leeyahay:
Saaxiib ayaa u mahadcelisey deeqda laakiin ma shaqeynayo aniga ... si fiican uma fahmo feylasha .DAT qaybta in ay jirto in la yiraahdo waxay u leedahay wadada feylka: ... laakiin ma garan karo faylka la doorto .. maaddaama aysan jirin feyl .DAT ee faylka C: \_ Program Files \_ ESRI \_ License \_ arcgis9x Waan runtii ii jeclaan lahaa haddii aad ka jawaabtay su'aalahayga.
Si aan kuugu caawino, waxaan jeclaan lahaa inaad cadayso haddii shatigaagu yahay asal ama qaniinyo, maxaa yeelay waxaa laga yaabaa in magaca kombuyuutarku uusan ku haboonayn hal kii ka diiwaangashan liisanka.
Hello, i quiciera pudieces caawin 8.01 arcview instatle iyo Segui dhaqaajiso ku indicas tallaabooyinka iyo aragto wax kale oo aan ahayn xaqiiqo ah in aad leedahay, marka aan joogo Start / Stop / calaamad u akhri aan u xusho tababaraha liisanka Arcgis laakiin in aan suuqa kala sheegay in Maamulaha shatiga ESRI iyo cadaadiska bilawga bilawga ah lama shaqeynayo. Qodob kale oo ay tahay Ajnbiga in ay doonayaan in ay bilaabaan barnaamijka baan ka heli saari doonaa mensionas qalad nidaamka: 10061 Winsock: xidhiidha diiday ka dibna raac talaabooyinka si aad u bilowdo iyo mar kale oo la magaca lic Arcgis ... ma muuqdaan oo kaliya lic ESRI ah ... ma fahmin in uusan u dhigma xogta in shay la aan iyo inta this saameyn ku yeelan, ma hadda in aan khalad ee geedi socodka ahayd. Waxaan rajeynayaa inaad i caawin karto, kahor mahadsanid.
In Windows Vista, si aad u gashid guddida adeegga waxaad sameyneysaa tan:
Badhanka Bilowga / R. Tani waxay u dhigantaa bilow, orod
ka dibna halkaas waxaad ku qortaa adeegyada.msc
Iyada oo kale ... wax fikrad ah kama qabo
Aad u fiican boggaaga. Mahadsanid!
Waxaan rabay inaan ku weydiiyo laba faahfaahin. Midda koowaad waa inaan haysto Vista oo aan ka shaqeynaynin wadada aad bixiso si dib loogu soo celiyo liisanka. Markii aan tago "Qalabka / Adeegyada Maamulka" uma oggolaanayo in aan galo. Waxaan doonayay inaan ogaado haddii taasi ay tahay dhibaato guud oo aan haysano Vista iyo haddii kale.
Waxaan sidoo kale rabay inaan wax kaa weydiiyo ArcGlobe. Anigu taas kama dhigi karo inay shaqeyso. Waxaan helaa farriinta soo socota «Dhalinta ArCID Module». Waana mid ku dhegan. Casharka aan soo dejiyey, waxaa lagu sharaxay in tani ay tahay sababta oo ah (kuwa inaga mid ah oo leh mashiin laba-core processor ah) mid ka mid ah buundooyinka ayaa si adag u shaqeynaya oo sharxaya sida loo xaliyo. Waa tan xiriiriyaha haddii aad rabto inaad soo dejiso:
Laakiin xalku kama shaqeeyo Vista. Daawashada fiidiyaha, miyaad u maleyneysaa inaad ka heli karto xalka Vista?
oo ma saari kartaa fidintaas? wadarta lama taageero
Thanks waxaan fahamsanahay in uu shaqeynayo, laakiin waxaan haystaa dhibaato kale, waxaa soo baxday in aan ku rakibo qalabka koritaanada ee aan u muuqdo in aan ku rakibo nuqul kale oo aan ku habbooneyn hadda imika arjiga uusan iga tagin arcmap
Fiiri tabta "server-ka baarista" tab oo hubi haddii liisanka loogu talagalay 3D Falanqeeyaha halkaas laga diiwaangaliyo
Wax dhibaato ah ma aqaano hadii Ma i caawin kartaa marka aan isku dayo in la isticmaalo oo ah falanqeeye bar 3D laakiin ha i odhan aan liisan lahayn qalliin in, waxa ay noqon kartaa xal ah?
Haddii aad mashiinka qaabayso, waxaa suurto gal ah in aaladda ay leedahay magac kale. Waxaad si sax ah u gujisaa kombuyuutarrada kombuyutarkayga, ka dibna waad arkeysaa guryaha oo aad hubisaa magaca ay ku leedahay "magaca kooxda"
magaca isla waa inuu ku jiraa faylka liisanka, hubi .lic. and .dat
Sharon isagu wuxuu leeyahay:
Waxaa soo baxday in sanadkii la soo dhaafay si guul leh loo soo dajiyo 9.2 arcgis in barnaamijyada aan maquina.Formatee partitioning sanadkan iyo rakibi doonaa XP, ka dibna ku daray si loo soo dajiyo cerciorándome arcgis mar kale in ay ahaayeen kuwa aan realcionados files ka arcgis hore laakiin xarunta cusub ayaa failure, sababtoo ah markii aan ordo lmtools ah server waxaa loo ogol yahay in ay joojiyaan ka dibna u bilaabaan rereads liisanka, laakiin qalad ma u muuqataa sida file lmgrd.exe uusan bilaaban oo aan iga daba tago si guul leh ku rakibidda ArcGIS Desktop
Hambalyo ... maxaa yeelay runta ayaan raacay talaabooyinkan waxaanan si sax ah u shaqeeyay ... Waxaan haystay dhibaatooyin isku mid ah oo ay adeegsadeen adeegga la shaqeeyay, laakiin ka hor inta aan hore u hubiyay in saxaafada. Grax waayo ka qayb ...
Marka loo eego shaashadda aad tusto, server-ka liisanka xitaa lama dhaqaaqin. Waa inaad hubisaa haddii faylkaaga liisankaaga oo leh dheereyn ah .dat uu sax yahay ama uu leeyahay macluumaadka la xiriira aaladdaaga
Hello, ka dib markaad samayso wax kasta oo aad tiraahdo weli waan helayaa qaladkan, fikradda ah oo laga yaabo in ay tahay xalka. horta aad u mahadsantihiin
Laakiin barnaamijku ma shaqeynayaa?
zirfrid isagu wuxuu leeyahay:
hello waxaan haystaa 9.2 arcgis oo raacay tallaabadaada, waan ahaa laakiin waxaan ku soo baxayaa fariin = been ah markaad tiraahdo, xalka qaarkii aad taqaan, mahad